5 Qodobbada Qeexaya Raaxada iyo Feejignaanta Kuliyadaha Kulanka
Badankeennaba waxay ku heshiin karaan in tayada maqalka ay tahay arrin muhiim ah marka ay timaado muusiga. Sida loogu talagalay qalab maqal ah oo aan xirneyn, lahaanshaha "dhagaxyada dhegaha ee ugu fiican" adduunka wax yar ma dhicin haddii aysan ku qanacsanayn waqti dheer. Intee farxad ayaad ka filan kartaa inta aad sameyneyso isbedel joogto ah iyo / ama qaadato nasashooyin badan si looga hortago horumarinta macbudka xanuunka ama madax xanuunka madax xanuunka keena?
Si ka duwan sida laydhka indhoolayaasha (IEMs, kuwaas oo wax yar ka duwan yahay dhegaha ), sida DUNU D2000, inta badan dhagaxyada kulaylaha iyo kuwa dhegaha ka baxa ma haystaan ​​raaxo ah talooyin wax lagu beddeli karo oo loogu talogalay qanacsanaanta caadada u ah. Doorashada dhego-galyada dhagaxyada leh waxay u egtahay doorasho muuqata, laakiin waxaa jira waxyaabo badan oo saameynaya raaxada guud marka laga reebo barkinta dhagaha oo keli ah. Sure, miisaanku waa tixgelin, laakin jilbaha dhagxaanta ee fudud waxay u egtahay in uu abuuro dareemo murugo wakhti goor ah sida kuwa culus. Waxaa jira waxyaabo badan oo la tixgeliyo marka loo eego dhagaxyada madaxa oo leh muuqaal fiican iyo qaab casri ah .
Sida muuqata sida wajiyada bini'aadamku u egyihiin mid la mid ah, haddana waxay ku kala duwan yihiin muuqaalada, cabbirka, iyo wareegyada, telefoonnada gacanta waxay sidoo kale muujiyaan kala duwanaansho u gaar ah faahfaahinta. Taasi waxay sameyn kartaa farqiga oo dhan. Waxa u shaqeynaya qof kale maaha mid raaxo leh . Sidaa daraadeed, halkan waa waxyaabo ay tahay inaad maskaxda ku hayso markaad raadineyso kuwa dhagaystayaasha ah ee ku haboon.
The Marshall Major II Bluetooth kulliyadaha waxay ka kooban yihiin nidaam fudud oo aan waxtar lahayn oo dhegta fidinta. Wareegyada Kulanka Marshall
Ma jiro heer caadi ah oo ah sida ay u weyn tahay ama u yar tahay laba ka mid ah kombiyuutarrada dhagaxyada waa inay helaan, oo maaha kuwa dhoofiyeyaashu doortaan naqshadaha bixiya fidinta dhererka dhegta. Dhibaatooyin dhowr ah ayaa soo baxaya haddii koobabku dhamaato aad u gaaban si aad ugu haboonaato dhegahaaga ama dhegahaaga. Koobabka (gaar ahaan dhagta) oo aan hoos ugu dhicin meel ku filan oo ay ku dhejiso dhegaha madaxa ee madaxa. Xoogaaga joogtada ah ee nudaha unugyada jilicsan ayaa si deg deg ah u keenaya xanuun - labanlaab haddii aad xirato muraayadaha tan iyo maadada adag ee ay ku dhexjiraan bartamaha.
Koobabka maqaarka ee dheeraadka ah waxay doonayaan inay ku dhegaan dhegaha oo dherer ah oo raaxo leh - sidoo kale muhiim u ah tayada codka ugu fiican ee suurtagalka ah ee ka timaada dhagaha. Koobabka maqaarka ee dheeraadka ah ee aan ku filnayn meel dhexdhexaad ah ayaa kaa tagi kara farqiga u dhexeeya maqaarkaaga iyo boogta, ku habboon agagaarka dhegahaaga. Iyo haddii aad leedahay farqi weyn, waxaad filan kartaa saameyn taban oo ku saabsan dhalashada muusikada iyo waxyaabo kala goynta qalabka dhegaha . Haddii koobabka maqaarka oo aad u gaaban aad u gaaban tahay qaabka iyo qaabka madaxaaga, waxaa laga yaabaa inaad dareentid inaad u jilicsan tahay si aad u xoqdo madaxa madaxa si aad u adkeyso taamku. Ma aha oo kaliya tani waxay noqon kartaa mid si ku meel gaar ah, xalka ujeeda, laakiin waxaa laga yaabaa inaad ku soo noqoto inaad dareentid culeys dheeraad ah oo hoostaada sare ee madaxaaga saaraya.
Markaad dooratid dhageysiga dhagaha, waxaad soo xushaa kuwa ku dhejin kara koobabka dhegahaaga adoon u baahneyn in si buuxda loo ballaariyo (haddii ay suurtagal tahay). Boorsada dheeraadka ah waxay ku siineysaa wax yar oo ku haboon si loo hagaajiyo; waxaad ku riixi kartaa barta hore ama gadaal xagga sare ee madaxaaga si aad u guurto cadaadis iyo / ama raadso meesha macaan ee ku saleysan sida aad ujoogsatid (tusaale, tooska oo fadhiya, barkin barkin). Inkasta oo aan caadi ahayn, qof kastaa wuxuu ku imaan karaa dhammaan dhagaxyada dhegaha oo wali aad u weyn, xitaa marka koobabka dhegta la dhigo ugu gaaban. Kuwani waa kuwa ugu fiican ee looga hortago xaaladaha badankood haddii aad doorbidid inaad si fiican u fadhidid iyo / ama si joogta ah u riixda dhegaha.
Xoogga xarkaha ayaa go'aaminaya sida ay adag tahay in taleefannada gacanta lagu dareemo cadaadiska madaxa. Sony
Xoogga jugleyntu waa waxa go'aaminaya heerka cabbirka siriyaalku uu wajihi doono wajigaaga. Kormeerka muuqaalku ma noqon doono meel aad u badan oo caawimaad ah tan iyo habka kaliya ee si dhab ah u muujineyso arrintani waa dhab ahaan xirashada samaacadda. Qalabka cidhiidhiga ah ayaa ku tusaya meesha ay cadaadisku yiraahdaan, iyadoon loo eegin sida ay u fiican tahay iyo dhererka barkimada dhegta. Haddii ay aad u badan tahay, waxaa laga yaabaa inaad dareentid in madaxaaga lagu dhejiyey mar labaad, taasi waxay ka sii xumaan doontaa kuwa gashiya muraayadaha. Haddii xoogga xarkaha uu aad u yaryahay, dhagaxyada dhegaha waxay u badan tahay inay ka daadiyaan oo ay ku dhicaan qaybta ugu yar ama madaxa madaxa.
Fikrad ahaan, waxaad dooneysaa inaad hesho kombiyuutarrada dhegaha oo bixiya xitaa qadar xooggan oo ku xiran dhammaan xiriirada ay sameeyeen dhegaha dhegaha. Haddii barkinjiyadu cadaadis adag ka saaraan macbadka (ama wax kasta oo jilicsan) marka loo eego meel kasta oo kale, waxaad filan kartaa in aaggaas daal badan yahay. Waa in tixgelin dheeraad ah loo sameeyaa kuwa xidhan xayawaanka, taas oo la kulmi karta dareen xoog leh oo cadaadis toos ah leh. Haddii aad awoodi kartid, xiro samaacadda dhageysiga 30 daqiiqo ama ka badan. Qof kasta wuxuu ku adkeyn karaa raaxo darrada shilalka gaaban; waxaad rabi laheyd inaad aragto sida aad u dareemeyso inaad dareentid ka dib wakhti dheer oo aan lahayn wax jebiya.
Sida kabo cusub oo kabo ama jilaan, qaar ka mid ah telefoonnada gacanta waxay u baahan yihiin wakhti yar oo "jaban". Waxyaabaha ay u muuqdaan in ay adag yihiin oo ka baxsan baakada tafaariiqda, sidaa daraadeed fidinta telefoonnada gacanta waxay gacan ka geysan kartaa in la dedejiyo habka lagu nasto qalabka. Raadi kubad ama sanduuq weyn (isku mid ah ama ka weyn cabbirka madaxaaga) si aad u dhigto samaacadaha dhagaxyada, oo ka tagto sidaas oo kale maalin ama laba. Noocyo badan oo taleefan ah ayaa u oggolaanaya in si joogta ah loogu hagaajiyo gacanta madaxa ilaa iyo inta aad neceb tahay. Si taxaddar leh u soco, maxaa yeelay waxaa jira waxyaabo badan oo kale oo badan oo loogu talagalay dhismaha go'an / qalafsan oo leh wax yar oo awood leh oo awood leh. Uma baahnid inaad si khiyaano ah u jebiso qalabkaaga.
Kulannada V-Moda Crossfade Wireless-ku wuxuu ku yaallaa koobabka dhegaha. V-Moda
Dhaqdhaqaaqa kubbadda gacanta ayaa gacanta ku haya gacan-qabsi xoog leh, marka loo eego qaabka dabiiciga ah ee wejiyada iyo sidoo kale bixinta xitaa cadaadiska. Wakaaladaha kulaylka waxaa laga heli karaa heerar kala duwan oo noocyada kala duwan ee noocyada dambe ee dhinaca dambe iyo / ama xagal toosan, sidaas daraadeed waxaa habboon in la fiiriyo sida loo isticmaalo alaabta. Siyaabaha kuleylka ah ee leh dhar gaaban oo dhar ah ayaa bixiya qadar ugu yar qolka qaylada - haddii dhinacyada sare / gadaal ee lugaha dhegaha ay kugu cadaadinayaan madaxaaga oo ka hooseeya hoose / gadaal, wax yar ayaa laga qaban karaa. Dhamaanteenna dhammaanteen ma heysano nadiif ah, madaxa sanduuqa qaabeeya si uu u buuxiyo nooca nambarka nambarka.
Nambaro badan oo badan ayaa u muuqda koobabka dhegta oo dhoobo kuna jiifso flat. Inkasta oo naqshadani ay ku habboon tahay ujeedooyinka socdaalka ee isku-dhafan (inkastoo dhageysigu caadi ahaan ugu fiican yahay ), waxay sidoo kale si weyn u saameysaa fududeynta raaxada. Qulqulka iyo wajiyada waxay u muuqdaan kuwo jilicsan, sidaas darteed koobabka dhegta oo leh qadar dheeri ah ee dhaqdhaqaaqa dambe ayaa awood u leh inay isla markiiba isku hagaajiyaan shakhsiyaadka horay u soo noqda. Kadibna waxaa jira kombiyuutarrada dhegaha leh koobabka dhegta oo leh awood u leh inay si toos ah u wareegaan - badanaaba naqshadeynta naqshadda. Dhaqdhaqaaqa tooska ah wuxuu kaa caawinayaa inaad hubiso in barkinta ay ku riixayaan si adag oo siman oo ku wareegsan dushooda iyo hoosta dhegahaaga. Iyo, dabcan, waxaad ka heli kartaa samaacadaha dhegeysiga leh labadaba dhinaca bidix iyo toosan, kuwaas oo u badan inay noqdaan kuwa ugu raaxo leh bilawga.
Markaad u soo iibsato dhagaxyo raaxo leh, raadi kuwa leh koobabka dhegta leh xoriyadda dhaqdhaqaaqa - xitaa wax yar ayaa tagi kara wadada dheer. Noocyada noocan oo kale ah waxay ka caawiyaan joogteynta xoog xargaha oo aan diirada saari doonin meelo gaar ah maqaarka, taas oo horseedi karta raaxo la'aan, daal ama xitaa xanuun. Laakin maskaxda ku hay in samaacaduhu ay yeelan karaan koobyo goyn kara oo wali waxay ku raaxaystaan ​​inay xirtaan. Kuwa leh lafaha jilicsan ayaa awood u leh bixinta dhaqdhaqaaqa tooska ah / dabacsan ee la doonayo. Ugu dambeyntii, waxaad rabtaa koobabka dhegaha ee dareemaya dabiiciga ah iyo jilicsanaantooda maadaama ay sii wadi karaan xitaa xitaa la xirriirto madaxaaga.
Qodobka Xajka iyo Cabbirka
Master & Dynamic wuxuu bixiyaa boogaha dhagaha ee dhagaha lagu riixo midabyo kala duwan. Master & Dynamic
Inkasta oo ay ku habboontahay in ka badan dhegaha ka badan kuwa dhagaha ah ee dhegaha , dhererka iyo xajmiga koobabka dhegaha ayaa muhiim ah. Haddii koobabka maqalka iyo barkimada oo aad u badan tahay, markaa waxaad filan kartaa dhagahaaga in ay taabtaan iyo / ama soo qaadaan kaneecada. Qaar ka mid ah, tani waxay noqon kartaa dhibaato buuqsan; kuwa kale, heshiis jaban. Caadi ahaan, dhejiyeyaasha dhagaxa ayaa dhigaya dhar khafiif ah oo ku yaalla birta ama balaastig ah oo ku yaal darawallada - ha ku xisaabin inay ku jiraan maqaarka dabiiciga ah ee maqaarkaaga xasaasiga ah.
Cabbirka iyo qaabka koobabka dhegta ka baxsan ayaa sidoo kale muhiim ah. Haddii aad marwalba kabaha aad u yar tahay cagahaaga, markaa waxaad fahmi kartaa sida aan raaxo u laheyn inuu dhegaha cram ku noqdo meelo yaryar. Xitaa barkimooyinka maqaarka oo jilicsan ayaa bilaabi kara inay dareemaan in ay dareemaan waqti dheer marka ay ku sii socdaan xoqin joogto ah iyaga oo u dhaqaaqaya ama u beddelaya mid ka mid ah madaxa. Kuwa ku jira xirmooyinka dheeraadka ah waxaa laga yaabaa in ay la kulmaan xanaaq badan oo ka iman kara koobabka dhegaha ee qotada dheer, sidoo kale. Haddii aysan fiicneyn, waxaad ogaan doontaa dhammaan isla markiiba.
Badankooda maqaarka / barkimada ayaa laga helaa mid ka mid ah saddexda shaxan: goobada, oval, iyo D. Inkastoo dhegaha aan la wareegin, koobabka wareegsan / boogaha ayaa ah kuwa ugu sahlan ee wax ka qabta. Caadi ahaan waxay bixiyaan qol ballaaran, oo run ahaantii uma baahnid inaad ka welwelisid walwalka dhegaha. Koobabka Oval iyo D-ga ah / barkimooyinka waxay u muuqdaan kuwo aad u adag oo gaar ah; waxaa laga yaabaa in aysan mar walba la jaan qaadin jihada dhagaha. Inta badan dhegaha dhagaha waxaa ku jira koobabka dhagta ee tooska ku haya khadka madaxa, xiitaa inkasta oo bini aadankoodu aysan lahayn dhegood oo si buuxda u fadhiisanaya. Si kastaba ha noqotee, waxaad ka heli kartaa qaar ka mid ah naqshadaha gaariga , sida Phiaton BT460 , oo qaadaya dabiiciga dabiiciga ah.
Wakaaladaha dhegaha ee dhegaha ayaa u sahlanaan kara in wax laga qabto maaddaama aysan jirin walaac dhab ah oo ku saabsan qoto dheer ee koobabka. Waxaad u baahan tahay inaad go'aan ka gaarto haddii xajmiga suufka ee uuraysan ama aan ahayn. Cabbirada culus ee culeyska / barkimooyinka waaweyn ayaa ku faafi doona xargaha caarada meel sare oo maqaarka ah, laakiin ka baxdo qol yar oo loogu talagalay hagaajinta. Cabbirada yaryar / barkimooyinka yaryar way fudud yihiin si ay u socodsiiyaan raaxada, laakiin waxay u muuqdaan inay si toos ah diiradda u saaraan dhibcaha gaar ah.
Beddelka iyo Madaxyada
Dhagaha Kuleylka ah ee Audio-Technica ATH-W1000Z waxay cayaari karaan koox gaar ah oo raaxo leh. Audio-Technica
Ugu dambeyntii, waxaad u baahan doontaa inaad tixgelisid tirada iyo tayada boogta ee labada koob ee dhegta iyo madaxa. Wixii sirta ah ee dhegaha dhagaha , qaabka iyo cabbirka suufaha ee koobabka waxay gacan ka geystaan ​​qoto dheer iyo meel bannaan oo loo heli karo dhegaha. Kinbooyinka khafiifka ah ayaa ka baxsan qolka yar si dhegaha looga ilaaliyo taabashada qalabka, waxayna sidoo kale dareemayaan inay yar yahiin inay madaxa kor u qaadaan. Qaybaha ugu adagi waa shaki badan, laakiin waxay ku dhejin karaan wax yar oo dhegahaaga ah. Wixii telefoonnada dhegaha ee dhagta, xaddiga boogta ayaa guud ahaan si toos ah ugu jaanqaada raaxada. Si kastaba ha noqotee, waxay qaadanaysaa xirashada samaacadda si aad u ogaato.
Nooca walxaha qalabka wax lagu dhigo wuxuu kaloo sameeyaa farqi weyn. Xumbada xumbida waxaa badanaa loo isticmaalaa gogol-xajinteeda jilicsan iyo neefsashada. Kaliya maskaxda ku hay in aan dhammaan xumbada xusuusta si siman loo abuuray; waxaa lagu samayn karaa isku dhafan noocyo kala duwan ah (aan waligeed ku jirin tilmaamahan, midkoodna). Kadibna waxaad leedahay qiyaasta caadiga ah ee maalinlaha ah, kaas oo bixiya taageero ka yar waxayna u egtahay in la isku xoqo waqti dheer. Inkasta oo nooca xumbada noocan ah ay wanaagsan tahay in la isticmaalo gudaha madaxa (iyadoo ku xiran qaabka), waxaa ugu wanaagsan-ka hortaga boogaha dhegta. Dhaqdhaqaaqa ma hayo.
Inkastoo intooda badani ay ka mid yihiin xayawaanka nooc ka mid ah dharka maadada polyesterka, mesh naylka, ama maqaar (dhab ah ama synthetic), waxaa jira samaacado lagu riixo gebi ahaanba. Waxaa laga yaabaa inaad ka soo baxdo dhammaan qalabka dhegaha ee isku xira xarafka lakabka silikoon. Siyaabadaha kale ee dhegaha, sida Qorshaha "Backtreat Backtreat" Plantronics, waxay ku daraan suunka elastik ah iyo silicone ee ka hooseeya qaybta birta. Hore wuxuu isku xiraa jilicsanaan madaxa ah, sida kan dambe wuxuu bixiyaa taageerada qaabdhismeedka iyo xoojinta xoogga.
Cuntada dhabta ee dhabta ah waxay u muuqataa mid aan muhiim ahayn iyada oo dhagaxyo dhagax fudud, gaar ahaan kuwa loogu talagalay raaxada maanka lagu hayo. Waa dhagaha dhagaha culus - sida caadiga ah dhagaha weyn ee dhegaha - inaad adigu rabtid inaad bixiso dareen dheeraad ah. Waxaa jira ficil isku dheellitir la'aan ah oo u dhexeeya xoogga xiiran iyo barkinta madaxa. Qalab adag oo xoog leh oo gacanta lagu hayo ayaa guud ahaan macnaheedu yahay miisaankaagu wuu hoos u dhici doonaa madaxaaga, isaga oo tirtiraya baahida loo qabo boogga qaro weyn. Taas beddelkeeda waxa kale oo ay haysaa run. Laakiin markii shaki ka jiro - ama isku dayaya in ay go'aan ka gaaraan inta udhaxeysa laba qof oo isku dhafan oo dhow - u tag midka leh xumbo qaro weyn. Xaqiiji in ay jiraan cillad ku filan oo ay si buuxda ula xiriiraan madaxaaga, maadaama wax dheeraad ah ay tahay aragga.
Ku dukaamee agagaarka
Dukaamo tafaariiqeed oo badan ayaa bixiya telefoonnada gacanta iyagoo bandhigaya demo oo isku day. Fuse / Getty Images
Waxaad arki kartaa sawirrada dhagaxyada kulaylaha oo dhan maalin dhan, laakiin taasi waxay kugu caawineysaa ilaa hadda. Weligaa ma ogaanaysid sida fiican ee wax u qabato ilaa aad isku daydo. Qorsheyso inaad xirato laba ka mid ah telefoonada gacanta oo ugu yaraan 10 daqiiqo oo aan kala go 'lahayn. Dheer waa ka wanaagsan tahay haddii ay suurtogal tahay maxaa yeelay wax kastaa waxay dareemi karaan ok / dulqaad leh dhowr daqiiqadood. Raaxada telefoonada gacanta waxay bedeli kartaa wakhti ka dib, markaa waxaad rabi doontaa inaad hubiso in waxa aad doorato uusan ku dhicin dhagaha dhagahaaga saacad ama wax ka dib.
Habka ugu fiican ee aad u bilaabi lahayd raadintaada telefoonka gacanta ee kuleylka ah ama ka baxsan dhageysiga waa hubinta dib u eegida internetka iyo talooyinka . Qoraallada intooda badani waxay diiradda saari doonaan codka, sidaas awgeed waxay qaadan doontaa xoogaa dadaal ah in ay ku laabato sharaxaadda ku saabsan taamku. Abuuri liistada telefoonada gacanta ee ugu xiisaha badan. Haddii liistadu ay aad u dheer tahay, waxaad mar walba hoos u dhigi kartaa adigoo tixgelinaya tayada qalabka, sifooyinka, qiimaha, iwm. Markaad haysato ku filan, waa waqti aad dukaanka ku dukaameysid.
Qaar ka mid ah tafaariiqda elektaroonigga ah ee tikidhada iyo tuumbooyinka ayaa leh samaacado dhegeysi, diyaar u ah inay tijaabiyaan. Waxaad sidoo kale waydiisan kartaa inaad aragto sanduuq kasta oo furan ama cutubyada soo noqnoqda haddii siyaasadda dukaanku u oggolaato. Tijaabi oo hubi dukaamada rikoodhka, sidoo kale, waxay u muuqdaan inay haystaan ​​kombiyuutarrada dhagaha si ay u dhagaystaan ​​albaabada. Haddii kale, waa inaad horey u sii wadataa iibsashada garaacida si aad u tijaabiso. Kaliya ogow waxa siyaasadda soo celinta ugu horeysay, oo aan lumin rasiidka. Qaar badan oo tafaariiqlayda internetka ah waxay bixiyaan siyaasado soo celin la'aan ah, oo badanaaba leh xulasho ballaadhan oo ka badan wixii aad ka heli karto degaanka. Amazon waa meel aad u wanaagsan oo aad ku bilawdo maaddaama kuwa leh raasumaalka rasmiga ah ay xaq u leeyihiin maraakiibta lacag la'aanta ah iyo celinta.
Kala doorasho kale oo lagu tijaabinayo samaacadaha dhegaha ayaa kireeya. Website-yada sida Lumo waxay soo bandhigaan xulasho gaaban oo la heli karo si ay u kireeyaan waqtiyada. Tani waxay u shaqeyn kartaa kuwa jecel inay isku dayaan waxyaabo kala duwan iyo / ama aysan dooneynin in dambiga ah ee wax iibsashada wax cusub ka dibna dib ugu soo noqdaan "xaalad cusub" mar kale iyo mar kale. Haddii kale, waxaad mar walba isku deyiri kartaa amaahdaada saaxiibbada. Weydii qaababka taleefanka gacanta ee ay leeyihiin iyo waxa ay u maleynayaan. Dhawaan kugu filan, waxaad ku jiri doontaa inaad haysatid labo raaxo leh oo aad mudan tahay.
Farqiga u dhexeeya 720p iyo 1080i
Miyuu Kula Hadlay Fadhiyeyaashu? Sayniska Culus ee!
Ku xiro garaaciddaada digital si aad u hesho TV-gaaga
Meelaha ugu Wanaagsan ee lagu iibsado Diiwaanka Vinyl Online
Nidaamka Stereo ee tobanlaha ah si loo hagaajiyo tayada dhawaaqa
5 Ciyaaraha ugu fiican ee Puzzle for Android Smartphones
La daabacay 15-inch MacBook Pro iyo 27-inch Retina iMacs
Dusha sare ee VoIP Routers Routers / Gateways
Sidee loo Bixiyaa Diiwaanka Windows
Logger - Command Linux - Unix Command
Tusaha Agaasimaha Guud ee Manjaro ee Octopi Graphic Package
7da ugu wanaagsan ee kombuyuutarrada lagu iibsado sannadka 2018
Sida loo Isku-duwo Link-ka ee ku-soo-gali Apple Mail (iPhone, iPad)
Optoma HD28DSE Dib u eegis Muuqaal Video ah - Qeybta 2 - Sawirrada
Ogeysiis Bilaash ah oo Bilaash ah (IDS) iyo Ka-hortagga (IPS) Software
Pioneer VSX-1019AH-K Sawir Sawir ah
Sameynta Nidaamka Telefishinka iyo Nidaamka Tiyaatarka ee Maarso Maarso
Sida Loo Dajiyo ama Loo Dhigto Macluumaad Macluumaad Macluumaad ah Mac OS X
Sidee loo dalbado Patch in File ah isticmaalka Linux
Sida Loo Helo Lacagtaada Ka Dhigata Blog (Wixii kale ee Isticmaalaya Xayeysiinta)
Minecraft.net Dib u Laabasho Bixinta Beta